Archive du 20180426
Fanelanelanan’ny vazaha Notsipahin’ireo depiote 73
Mitady hanjakazaka indray ny vazaha ! Te hametraka dian-tanana, hifehezana ny Malagasy amin’ny famahana izao krizy politika lalovan’i Madagasikara izao.
Pasitera Roger Andriamisata “Mila ravana io CENI io”
Tafiditra tao anatin’ny fanambarana nataon’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na ny HMF ny hoe : « Ny mpitondra fanjakana dia natao hiaro ny ain’ny vahoaka entina koa rehefa solafaka toy izao dia antsoina mba hanam-pahendrena hiala am-pilaminana »,
Depioten’ny Fanovana “Miala ny filoha, hadihadiana ny praiminisitra”
Tafapetraka tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny Fitsarana avo momba ny lalàmpanorenana na ny HCC ny fitoriana mitaky ny fialan’ny fanalana ny filoham-pirenena amin’ny toerany noho ny fandatsahan-dra sy famonoana ny Malagasy mpiray tanindrazana, ka notakian’ny depiote ny fialan’ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Fifidianana 2013 Nandany 138 miliara Ar Rajaonarimampianina
Tamin’ny alalan’ny fanadihadiana nataon’ny mpandinika vahiny, Manuel Wally ka namoahana ilay boky mitondra ny lohateny hoe “Etude comparative des pratiques en espace francophone”,
Fandaminana an’i Madagasikara Ho avy indray ny SADC sy ny “Feuille de route”
Voaresaka tamin’ny fivoriana SADC tany Luanda Renivohitr’i Angola ny 24 aprily lasa teo ny toe-draharaha politika mikorontana eto Madagasikara.
Fifidianana 2018 Mpanatanteraka ihany izahay, hoy ny CENI
Samy manery an-kolaka ny amin’ny tokony hanatanterahana ny fifidianana amin’ity taona ity daholo ny vondrona iraisampirenena miara-miasa amin’i Madagasikara. Anisany ny vondrona afrikanina sy firenena mikambana.
Fikambanamben’ny sendika sy ny mpiasam-panjakana Tsy mila fifidianana raha tsy voalamina ny lalàna rehetra
Nivoaka tamin’ny fahanginany ihany koa omaly ny fikambanamben’ny sendika sy ny mpiasam-panjakana Malagasy na ny CSAEM manoloana ny toe-draharaham-pirenena misy ankehitriny.
Tolom-bahoaka ho an’ny fiovana Mino ny fahatafitany ny ankamaroan’ireo olon-tsotra
Miditra amin’ny andro fahenina anio alakamisy 26 aprily ilay tolom-bahoaka tanterahina etsy amin’ny lapan’ny tanànan’Analakely hanoherana ny kolikoly sy ny jadona natao amboletra teto amin’ny firenena.
Antoko Maitso Mitaky fifidianana mialoha ny fotoana
Olan’ny samy Malagasy, aleo samy Malagasy ihany no hamaha azy, hoy ny filohan’ny antoko politika Maitso, Alexandre Georget, omaly, tetsy amin’ny biraon’ny antoko etsy Ambohitsoa.
IMBEH Serge Miantso ny tafika hikarakara fifidianana
Manahirana tokoa ny mamaritra ny tranga iainana eto Madagasikara mialoha ny fifidianana izay ho filoham-pirenena amin’ity taona 2018. Fifidianana mangarahara sy tsy mampisavorovoro, indrindra, eo amin’ny Malagasy no ilaina ankehitriny.
Manakaiky ilay ora farany
Mitady ho rendrika ny sambonao r'ilay Jean Miala tsikelikely ireo nipetraka teo amin'ny "devant" Manomboka mandà baiko ireo foloalindahy Ireo Polisy ihany koa tsy vavy tsy lahy.
Omaly no nofaranana tamin’ny fomba ofisialy ilay tetikasa momba ny fampivoarana ny fanabeazana ny ankizy marefo izay voailika anaty rafi-pampianarana eto Antananarivo.
Famatsiana rano fisotro madio Toerana telo lehibe eto Madagasikara no hahazo
Malagasy miisa 450.000 no ezahina hahazo rano fisotro madio ato ho ato, tetikasa hiarahan’ny USAID sy ny Fondation Coca Cola. Raha ny fantatra, mbola vao ny 35 %-n’ny mponina manerana ny Nosy no mahazo hatreto, antony mampahazo vahana ny aretim-pivalalana sy ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika mahazo ireo ankizy latsaky ny dimy taona eto amintsika.
Ahmad – filohan’ny CAF Nahazo “Docteur Honoris Causa” tany Ghana
Nosaloran’ny University Professional Studies Accra (UPSA) any Ghana ny mariboninahitra ambony Docteur Honoris Causa ny filohan’ny CAF, ilay teratany Malagasy Ahmad.
Cosafa Cup 2018 25 ireo mpilalaon’ny Barea voafidy
25 no isan’ireo Barean’i Madagasikara handray anjara amin’ny fifaninanana Cosafa Cup hotanterahina any Afrika Atsimo ny 27 mey ka hatramin’ny 09 jona ho avy izao.
Journée Internationale du Football et de l’amitié Nanamarika izany tetsy Amparibe i Madagasikara
Nanamarika ny andro iraisam-pirenena « jourrnée Internationale du Football de l’amitié » niaraka tamin’ireo firenena miisa 211 mandray anjara amin’ny tetikasa Football For Friendship 2018 karakarain’ny orinasa Gazprom any Rosia i Madagasikara.
Baolina kitra D-1 tompondakan’Amoron’i Mania Hiditra amin’ny dingana faharoa ny fifaninanana
Vita soa amantsara, hoy ny filohany Randriantsoaniaina Nirilanto na Dona, ny dingana voalohany tamin’ny fifaninanana fiadiana ny ho tompondakan’ny ligin’ny baolina kitra any Amoron’i Mania.
Izay manina manatona
Mitohy hatrany ny dingan’ireo vahoaka marobe sy ireo solombavambahoaka manohitra ny fampandaniana lalàna amboletra eto amin’ny tany sy ny firenena. Raha tsiahivina, anisan’ireo niantso fifampidinihina efa ela izy ireo saingy voarindrim-baravarana hatrany.
Vola alaina amin’ny mpampianatra hanampiana ny DREN Tsy marina, hoy ny tompon’andraikitra
Velon-taraina ireo mpampianatra eny anivon’ny sekoly ambaratonga fototra sy ambaratonga faharoa teto amintsika tato ho ato fa misy vola alain’ny fitondram-panjakana amin’izy ireo isam-bolana mba hanampiana ny DREN amin’ny fampandehanan-draharaha, hono.
Mpanakanto Malagasy Iharan’ny famotehana marolafy
Eo ihany ny fanakatsakanan’ireo ben’ny tanàna sy solombavambahoaka sasantsasany ny fampisehoana ataon’ireo mpanakanto malagasy rehefa tsy mampiasa ny fanamafisam-peom-panjakana, raha ny nazavain’ireo sendikan’ny artista tetsy amin’ny kianjan’ny kanto tamin’ny herinandro, fa amin’izao fotoana izao koa dia mitaraina izy ireo fa mirongatra be ny fangalarana ny tsangan’asany any anaty tambazotran-tserasera any.
Amin’ny alahady ho avy izao no ho tonga eto an-tanindrazana ny nofo mangatsiakan’i Andrianjaka Rajaonah, filoha mpanorina ny antoko Otrikafo.
Masomboly vary safiotra Manomboka maharesy lahatra ny tantsaha any Alaotra
Efa misandrahaka amin'ny faritra maro any Alaotra ny masomboly vary safiotra na hybride. Ireo tantsaha ao amin'ny kaominina Ilafy amin'izao dia efa liana amin'ny fampiasana azy ity noho ilay izy vetivety foana dia efa miakatra ary tsy dia betsaka masonkarena.
Tolom-panafahana nifandimby Tsy mahay maka lesona ny antoko HVM
Ny zavatra nitranga teny Analakely ny sabotsy 21 aprily 2018, izay nitarika faharatrana sy fahafatesan` olona, dia mampatsiahy ireo tolom-panafahana nifandimby teto Madagasikara tamin`ny taona 1972, 1991, 2002, 2009.